Gambella Taxi Strike - Bu'ura Heera RDFI Kew 93'tiin Labsiin Yeroo Muddamaa -
By fmegersa | February 28, 2018
Gurrandala 28, 2018 Via Shamshadin Taha
Bu’ura Heera RDFI Kew 93’tiin Labsiin Yeroo Muddamaa Haala Akkamii Keessatti Labsama: Haala Waliigalaa fi Qabatama Ammaa
Obbo Ibsaa Gammadaatin
Weerarri biyya alaarraa yoo biyyattirratti godhame ykn sochiin (hidhannoo) Sirna Heeraa balaarra buusu yoo uumamee fi sirna seeraa idileetiin too’achuun yoo hin danda’amne, balaan uumamaa yoo dhaqqabe ykn dhukkubni fayyaa ummataaf balaafama ta’e yoo umame; Manni Maree Ministirootaa ka Federaalaa Labsii Yeroo Muddamaa labsuu ni danda’a.
Labsiin kunis wayita paarlaamaan hojiirra jirutti yoo labsameera ta’e sa’aatii 48 keessatti paarlaamaaf dhiyaatee sagalee bakka bu’oota ummataa 2/3 yoo argate ni ragga’a; yoo dhabe kufaa/hafaa ta’a. Labsichi wayita bakka bu’ootni ummataa boqonnaarra jiran yoo labsame, mana maree bakka bu’oota ummataaf dhiyaachuu kan qabu guyyoota 15 keessatti dha. Guyyoota 15f hojiirra ni oola jechuu dha. Labsiin kun guyyoota kana keessatti dhiyaatee sagalee bakka bu’oota ummata 2/3n yoo deggarame ni ragga’a yoo deggarsa dhabe raawwiin labsichaa ni guyyaa kanarraa eegalee ni hafa. Kanaan booda sirni seeraa idilee itti fufa.
Amma biyyatti keessatti weerarri alaa hin mudanne. Sochiin Sirna Heeraan dhaabbate gaaga’us hin jiru. Mirga ofii gaafachuun seeruma. Jijjiirama bu’uraa gaafachuun mirguma Heeraan mirkanaa’e dha. Jijjiiramni akka barbaachisu mootummaanuu itti amanee lallabaas ture. Hinumaa dirree siyaasaa bal’isna jedhee hidhamtoota siyaasaa hanga tokko gadhiisee ture. Sochiin hidhannoo kan mootummaa waraanee fonqochuuf hojjetaa jiru hin jiru. Kana mootummaanis hin ibsine. Balaan uumamaa, dhukkubni hin jiru.
Labsiin Yeroo Muddamaa amma hojiirra jiru kun ulaagaa Heeraan kaa’ame tasuma hin guutu. Hinuma mirga ofiin of bulchuu mootummata naannolee kan daangessu dha. Caaseffamni mootummaa kan federaalummaa fi mirgi hiree ofii ofiin murteeffachuu labsii yeroo muddamaatiin kan hin daangofne ta’uun heeran tumamus labsiin kuni garuu daangessee jira. Koomaandipoostiin dhaabbatee labsicha hojiirra oolchu kun mataa isaatti bu’ura Heerawaa kan hin qabnee fi hojiin hojjechaa jiruu fi caaseffamni isaa kan loogii sanyummaa calaqqisu (olaantummaa saba bicuuf laatu) akkasumas bifa Heera Kew 1 fi 39 kabajeenii kan hin hojjennedha.
Kanaafuu, Labsiin Yeroo Muddamaa yeroo lammaffaaf dhiheenya labsame kuni bu’uraa Heeraa waan hin qabneef, yeroo kanatti barbaachisaas waan hin taaneef, biyyattii keessatti nagaa fi tasgabbii uumuuf waan hin gargaarref akkasumas ummattoota biyyattii fi hawaasa Addunyaatiin (USA, EU, fi kkf) kan fudhatama hin arganne waan ta’eef akka itti fufee hojiirra hin oolle miseensotni mana maree bakka bu’oota ummataa mormanii kuffisuu qabu.
← SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Gurraandhala 28, 2018 Oromo Voice Radio (OVR) Broadcasts- 28 February 2018 →